Onye Isi Na-agba Ọkụ, Na-achịkwa Onwe Gị! - Gụọ Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics n'ịntanetị
Onye Isi Na-agba Ọkụ, Na-achịkwa Onwe Gị! nkezi 3.6 / 5 si 50
Nke ato, o nwere ihe nlere 43K
Na-agụ Onye Isi Na-agba Ọkụ, Na-achịkwa Onwe Gị!, ọmarịcha manwa.
N’oge ọ banụ juru ebe niile, enyi ya nwanyị sekpuru ala ma rịọ maka nwanne ya nwanyị ka ya lụọ. A napụrụ ya ihe nketa ya wee bụrụ onye ego maka ezinụlọ Xi. Obi ya siri ike dị ka nchara, ọ tụbara mma n'ime obi ya iji nwaa iwe na iru uju ya niile. Mgbe ahụ, na ntabi anya - Mu Yuchen, mara mma, oyi CEO nke Shengshi Group onye na-achị City Z - pụtara n'ihu ya. Ọ jụrụ: Mu Yuchen, ị ga-alụ m?
Chapter 78	Nwere ike 24, 2021
Chapter 77	Nwere ike 24, 2021
Chapter 76	Nwere ike 24, 2021
Chapter 75	Nwere ike 24, 2021
Chapter 74	Nwere ike 24, 2021
Chapter 73	Nwere ike 9, 2021
Chapter 72	Nwere ike 2, 2021
Chapter 71	Nwere ike 2, 2021
Nwanyị ahụ e kwere ná nkwa
Isi dọkịta kachasị ara isi obodo